वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयतामा जोड दिएका छौं « Sahakari Nepal
वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयतामा जोड दिएका छौं
प्रकाशित मिति : 12 July, 2018 10:40 am
निमित्त व्यवस्थापक – जनसचेतन साकोस
१. एक्सेसमा गएपछि संस्थामा कस्तो परिवर्तन आएको छ ?
– एक्सेसमा गएपछि धेरै संस्थामा परिवर्तन आएको छ । एक्सेसका ८६ वटा सूचक पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षा कोषमा पनि परिवर्तन आएकोे छ । संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई वित्तीय शिक्षा दिनुका साथै बिमा सुविधा र केही रोगका उपचारमा सहयोगसमेत गर्दै आएको छ । हामीले नारा नै तय गरेका छौं ‘२०८४ सम्मको जुक्ति, निरपेक्ष गरिबीबाट मुक्ति ।’ सदस्यको आर्थिक, सामाजिक जीवनस्तर परिवर्तनमा संस्था सधैं क्रियाशील रहँदै आएको छ । सदस्यको इच्छा, आकांक्षा पूरा गर्न हामी विविध खाले कार्यक्रम डिजाइन गर्ने गर्दछौं । सदस्यलाई ऋण मात्र होइन, व्यावसायिक योजना दिएर उत्पादन बढाउन र आम्दानी स्रोतमा वृद्धि गर्न जुक्ति सिकाउने गर्दछौं ।
२. साकोसले सदस्यको जीवनस्तरमा कत्तिको सुधार ल्याउन सकेको पाउनुभएको छ ?
– साकोसले सदस्यको जीवनस्तर साधारमा विशेष ध्यान दिएको छ । अमेरिकाको एक युनिभर्सिटीसँग सहकार्य गरी सेयर सदस्यको वास्तविक परिवर्तन अध्ययन गरेका थियौं । उक्त अध्ययनले पनि धेरै परिवर्तन भएको देखाएको छ । त्योसँगै सेवामा गुणस्तरीयता र सन्तुष्टिको अध्ययन गरेका थियौं । सदस्यको आयमा वृद्धि गर्ने र बचत गर्ने कुरामा सफल भएका छौं । सदस्यलाई व्यावसायिक बनाउने कुरामा हामी अगाडि छौं । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि ऋण दिएर स्वदेश तथा विदेशमा पढाउने पनि गरेका छौं । सदस्यको खर्च र आम्दानीको स्तरमा वृद्धि भएको छ, वित्तीय व्यवस्थापनमा ठूलो मद्दत पुगेको छ ।
३. एक्सेसमा जान चाहने सदस्यले वस्तु तथा सेवाका क्षेत्रमा के काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
– सर्वप्रथमतः वित्तीय विवरण बलियो बनाउनुपर्छ । पल्र्स मनिटरिङ, सुशासनमा चल्नुपर्छ । सदस्यलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यस्तै कर्मचारी सन्तुष्टिका कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । काम गर्ने क्षमताका कुरामा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । एक्सेसमा जान चाहनेले ८६ वटा सूचक शतप्रतिशत पालना गर्नुपर्छ । वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्छ । संस्थाले पूर्वाधार क्षेत्रमा के गरेको छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ । नीति, नियम र प्रविधि अवलम्बन गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिन सक्नुपर्छ । वस्तु तथा सेवामा सदस्यको पहुँच बढाउनुपर्छ । सेवालाई छिटो छरितोे र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ ।
४. एक्सेस प्राप्त गर्न र त्यसपछिका समयमा पनि केही खर्चिलो देखिएको पाइयो, यसप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
– एक्सेसमा गइसकेपछि अक्कुलाई लेखा परीक्षण शुल्क र नेफ्स्कुनलाई प्राविधिक शुल्क नियमित तिर्नुपर्छ । अक्कुको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रतिनिधि नेपाल आएर नेपाल आएर लेखापरीक्षण गर्छन् । सोका लागि पाँच सय डलर तिर्नुपर्छ । यसलाई महँगो भन्न मिल्दैन । लेखा परीक्षणका क्रममा वित्तीय डाटा विश्लेषण गरिन्छ । वित्तीय विश्लेषणमा कुनै पनि सूचक तोकिएको मापदण्हभन्दा बढी या घटी हुँदा पनि खराब भएको मानिन्छ । संस्थाले अवलम्बन गरेका नीति के कस्ता छन् भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिइन्छ । पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्मचारीको क्षमताअनुसार पनि संस्था सफल र दिगो हुने गर्दछ । नेफ्स्कुनको प्राविधिक सहयोगका लागि ६० हजार शुल्क तिर्नुपर्छ ।
५. जनसचेतन साकोसले सदस्यलाई कस्तो सेवा दिइरहेको छ ?
– मुख्य त बचत तथा ऋणको कारोबार नै हो । हामीले सदस्यलाई १७ प्रकारको ऋण प्रवाह गर्दछौं । कृषि, हायर पर्चेजलगायतमा ऋण प्रवाह गर्दै आएका छौं । संस्थाले बचतमा १२ दशमलव ५ देखि १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएको छ भने कर्जामा १५ र १६ प्रतिशत ब्याज लिने गरेका छौं । पशुपालन, कृषि, उद्योगलगायत उत्पादन र शैक्षिक क्षेत्रमा अन्य कर्जाको तुलनामा एक प्रतिशत कम १५ प्रतिशत ब्याज लिने गरेको छ । 